Zvekutaurirana Hardware uye chirongwa mhinduro mupi-Qingdao yakashandiswa photonic matekinoroji co., Ltd.
Inoshamisa Optical Kutaurirana Zvishandiso
Uye FTTH Project Solutions Mupi
Nyanzvi mukugadzirwa uye kupihwa kwe
patchcord, pigtail, plc optical splitter, WDM / CWDM mhinduro.
SC UPC OPTICAL FIBER PATCHCORD SX SM BHUU LOW IL 0.9 2.0 3.0 PATCHCORD
Patchcord SC / APC-LC / UPC DX SM 3mm
FC UPC OPTICAL FIBER PATCHCORD SX SM KABHUKU LOW IL 0.9 2.0 3.0 PATCHCORD
SC APC LC APC LC UPC OPTICAL faibha chinongedzo OEM
BUNCHED PIGTAIL FC APC SC APC
MINI TYPE SPLITTER, 1x2 1x4 1x8 1x16
1X8, MINI TYPE SPLITTER, SC / APC, TEST SPLITTER
CWDM, ABS-BOX TYPE, WAVELENGTH KUSANGANISWA
Qingdao yakashandiswa photonic matekinoroji co., Ltdwas yakagadzwa muna 2001, yakabatana pakati pekambani yehurumende neyekambani yeCanada.APT inyanzvi mukugadzira, kugadzira, uye kushambadzira zvigadzirwa zvemaziso, photoelectric yekufambisa michina, uye CATV. tinogona kupa vatengi vane yepamusoro zvigadzirwa mumusika.
Dzidza Zvimwe +
APT inotora North America uye Europe tekinoroji yekugadzira, ita shuwa kuti chigadzirwa chiri TOP mumusika.
Zvese zvigadzirwa zvinogadzirwa mukirasi zviuru gumi zvekuchenesa musangano uye zvakanyatsoedzwa nezviridzwa zveAmerica.
APT Inoisa hofisi muCanada, Australia, Indian, uye Qatar, tinogona kukupa rutsigiro kwauri nekukurumidza kukurumidza.
Maawa makumi maviri nemaviri anoshanda, unogona kutiwana chero nguva.
Huru (40000㎡) uye musangano unokwanisa neSI chitupa. Yakapihwa seyepamusoro -tech bhizinesi nehurumende.
Isu tinopa emahara sampuli kuratidza mhando yechigadzirwa, saka ita bhizinesi nesu rakachengeteka uye nyore.
Industry Trends: Iyo keke yakakura zvakakwana ichiri ...
Munguva pfupi yapfuura, China Mobile yakazivisa mukwikwidzi wekuhwina weiyo general optical tambo yekuunganidza mu2020-2021. Changfei akanyatso kutora chinzvimbo chinotungamira nechikamu che9.44%, ichiteverwa ne fortis, Hengtong, Fiberhome nemamwe mahofori ...
Qingdao APT vakapinda Ali Ali ...
Pakupera kwaMay, 2020, mutambo wekutenga weAli International Station wakasvika kumagumo, uye Qingdao APT Kambani yakagamuchira zvinhu zvizere mumutambo wekutenga uyu.
Iyo kambani iri mukuita kurwisa denda uye ...
Kubva pakatangazve kugadzirwa muna Kukadzi 10,2020, qingdao APT kambani yakazadzisa zvizere zvese zvehutano nekuchengetedza zvinodiwa zvakarongedzwa neyakaunganidzwa zone manejimendi komiti.
APT kirasi diki --- Kuongorora pane izvo Zvinoitika ...
1. shandisa zvizere bandwidth zviwanikwa zve optical fiber. Fiber ine yakakura bandwidth zviwanikwa (yakaderera kurasikirwa bhendi). Wavelength kupatsanura tekinoroji yekuwedzera inowedzera iyo yekufambisa simba ye fiber neakawanda nguva ...